पोखरामा स्टाइल वार्स २०१८ हुने
प्रकाशित मिति : : मङ्लबार, मंसिर ११, २०७५
पोखरा, मंसिर ११ । पोखरामा आउँदो शनिबार स्टाइल वार्स २०१८ हुने भएको छ ।
द सौलमेट्स क्रियुको आयोजनामा पहिलो पटक पोखराको सभागृहमा हुन लागेको कार्यक्रममा भारत, कोरिया,चाइना, अष्टे«लिया लगायत नेपालका विभिन्न ठाँउहरुका प्रतियोगीहरुको सहभागिता रहने सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको हो ।
स्टाइल वार्स मार्फत नेपालमा हिपहप कल्चरको विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको क्रियु मेम्बर प्रिन्स तुलाचनले बताए । उनका अनुसार नेपाली समाजमा बिबोइङलाइ हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले बिबोइङको विकास सम्बद्र्धनका लागि पनि हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं, उनले भने ।
बिहान ११ बजेबाट हुने कार्यक्रममा निशूल्क रुपमा प्रवेश गर्न पाइनेछ ।
स्टाइल वार्स एउटा अन्तराष्ट्रिय हिपहप फेस्टिबल रहेको तुलाचनले बताए । जस्मा थुप्रै अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगीहरुको सहभागिता रहन्छ । बिबोइङ, ग्रयाफिटी र्यापसेसन, डिजेइङ, लाइभ स्केटकिङगस,म्युजिक लगायतका कार्यक्रम पनि रहेको उनले जानकारी गराए ।
चाइना, अष्ट्रेलिया र पोखराको गरि ३ जना जजको सहभागितामा कार्यक्रम गरिने आयोजकले बताएको छ ।
सन् २०१३ मा पोखराबाटै स्थापना भएको क्रियुले विगतमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाइ सकेको छ । क्रियुले अनाथ बालबालिका, महिला सशत्तिकरण, भुकम्पपिडितलाई कार्यक्रम गरि संकलित रकम मार्फत सहयोग प्रदान गरि सामाजिक कार्य समेत गरेको क्रियुका सदस्य मोहन क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष देखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नेपाल बे्रकिन एण्ड डान्स स्पोर्टस संघको गठन गरि संस्था दर्ता गरिएको छ । सन् २०१७ मा ओलम्पिकमा बिबोइङलाई खेलको रुपमा समावेश गरिएको उनले जानकारी गराए ।
नेपाल–अफ्रिका चलचित्र महोत्सव अर्को सातादेखि
नेपाल टेलिभिजनमा ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लव’, बढ्दै टेलिभिजनको लोकप्रियता
सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको शुरुआत : प्रम ओली
डा. केसी अनशनको तयारीमा, माग पुरा गर्न सरकारलाई तीन हप्ते अल्टिमेटम
प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकका प्रतिवेदन पेश
पशुपति क्षेत्रमा पाँच हजार बिरुवा रोपिने
काठमाडौं बुद्धनगरको फर्निचर उद्योगमा भिषण आगलागि
मन्त्री अधिकारीलाई कालो झण्डा देखाउने नयाँ शक्ति विद्यार्थीका नेता पक्राउ
अब गरिबी निवारण कोषको पुर्नसंरचना हुन्छ : उपाध्यक्ष भट्टराई